Umfanekiso wokuqala wentengiso weGlass Qaphela 9 ucociwe | I-Androidsis
Umfanekiso wokuqala wentengiso weGalaxy Note 9 ucociwe
Ngalo lonke ixesha kukho ixesha elincinci lokuba ekugqibeleni siphume ngaphandle kwamathandabuzo kwaye sazi ngokweenkcukacha ukuba iza kuba njani i-Samsung Galaxy Note 9 elandelayo, Isiphelo sendlela esinabaphulaphuli bendawo Nje ukuba uqhele istayile esidityanisiweyo, awusenakuphila ngaphandle kwayo Kwenzeka into efanayo nakubasebenzisi abakhe baqhela kujongano lomenzi, kubabiza kakhulu ukutshintsha iimveliso, ngakumbi ukuba bangabasebenzisi beSamsung.
Umthombo onerekhodi yempumelelo kakhulu usandula ukuvuza oko kubonakala ngathi kungoku Izinto zokwazisa zeSamsung Galaxy Note 9, ikwangumbeko wokuqala wokuvuza ukuba i-S Pen iya kuba njani, ipeyinti ethe yavela minyaka le ukubonelela ngemisebenzi, ukongeza kukuchaneka okukhulu.
Ukuba ujonga umfanekiso, utshintsho kuyilo kwiNqaku le-9's S Pen alubonakali lukhulu njengoko belunjalo kwiGalaxy Tab S4, ethi ukuba kubonakala ngathi isikwere ngaphezulu, into enokuba ayingombono olunge kakhulu kubasebenzisi abathile abaya kuthi baphele bechaza ukuba esi sikwere siphela sikruqula xa kubhalwa.
Ngokokuvuza okutsha, I-S Pen ye-Galaxy Qaphela i-9 iya kusebenza ngeBluetooth, Ukuvumela ukuba wenze imisebenzi eyahlukeneyo kubandakanya nolawulo lomculo umzekelo. Ukuhambelana kwitekhnoloji yeBluetooth kuye kwavuza emva kokuba iNqaku 9 lidluliswe yi-North American FCC, umzimba ophetheyo ujongana nezixhobo zonke ezifuna ukufikelela kwimakethi yaseMelika.
Lo mfanekiso ukwangqina into esele ihletyiwe malunga indawo ethe tyaba yeekhamera, nangona inzwa yeminwe ebhalwe ngasekhohlo efanayo. Umbono wokuqhubeka nokusebenzisa uyilo kunye neekhamera kungenxa yokuba inkampani iye yafuna ukwandisa amandla ebhetri ukuya kwi-4.000 mAh ukuze yanelise ukugxekwa okuye kwafunyanwa sisiphelo kwiinguqulelo zamva nje.
Nge-9 Agasti ezayo siza kushiya amathandabuzo, Kumsitho oza kubanjwa yiSamsung kwisiXeko saseNew York. Ukuza kuthi ga ngoku, siza kuqhubeka nokukhupha izaziso kunye nokuvuza okupapashiweyo malunga nale modeli yeSamsung.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Umfanekiso wokuqala wentengiso weGalaxy Note 9 ucociwe
I-Sony Xperia XZ2 yeNkulumbuso iza kuphehlelelwa eSpain ngo-Agasti
Baleka ukufa okuthile ngeengalo zakho kumlutha weClumsy Climber, omtsha ovela eKetchapp